12V အိတ်ဆောင်ကားဖုန်စုပ်စက် - တရုတ် Abd စက်မှုဇုန်
PDF ဖိုင်အဖြစ် Download ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ
ထုတ်ကုန်အမည် 12V အိတ်ဆောင် မော်တော်ကားဖုန်စုပ်စက်
ကုန်ပစ္စည်းဇာစ်မြစ် Ningbo, တရုတ်
အသုံးပြုမှု scope ယာဉ်အသုံးပြုခြင်းကို
အသုံးပြုမှုကး အပူပိုင်းနှင့်စိုစွတ်သော Dual-အသုံးပြုမှု
ကို Compact နှင့်အပေါ့ပါး
အဆင်ပြေကို attachment နဲ့ရေချိုးနိုင်သော filter ကိုနှင့်အတူအပြီးအစီး
ON / OFF switch ကိုထိန်းချုပ်ထား, သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
သင်တစ်ဦးစီးကရက်ကိုပိုင်ဆိုင်လိုလျှင်ပိုမိုပေါ့ပါး plug ကိုအိမ်များအတွက်ဝတ်စုံ, ရုံး, ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ယာဉ်အားလုံး
အများဆုံးခရီးဆောင်လေကြောင်းပါဝါလိုအပ်သောအိမ်ထောင်စုနှင့်အလုပ်အကိုင် site ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်အစွမ်းထက်နှင့်တာရှည်ခံမှုတ်တံ။ လေထုစောင်ရေ, ခြောက်သွေ့ကော်ဇောများနှင့်အခြား damp မျက်နှာပြင်များအဘို့ကြီးသော! စိုစွတ်သော / အပူပိုင်းကား Vac အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းတို့အတွက်စုံလင်တစ်ကားရဲ့ interior.Crevice tool ကိုကနေ Plus ကိုနှင့်အမှိုက်အမြန်များအတွက် convenience.Great ဘို့ကားတစ်စီး seats.Lightweight နှင့် bagless ကြား၌ရောက်ရှိတက် 5.5 liquid.Upholstery tool ကို၏ FL အောင်စနှင့်ဖုန်မှုန့်ဖြီးရွေး သင့်ကား, ထရပ်ကားသို့မဟုတ် SUV ကားအတွက်ယိုဖိတ်၏သန့်ရှင်းရေး။
★ Power စုတ်ယူခြင်း & ဆူညံသံ: အဆိုပါကားတစ်စီးလေဟာနယ်အီး, ROHS လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရှိပါတယ်။ 12volt, 120w, 4000PA စုတ်ယူခြင်း။ 75db အနိမ့်ဆူညံသံ။ ထိထိရောက်ရောက်ကားတစ်စီးအတွင်းမှမြေမှုန့်ရှင်းလင်းပေးနိုင်သည်။
★ဘက်စုံသုံး: အဆိုပါကားတစ်စီးလေဟာနယ်အပူပိုင်း & စိုစွတ် application ကိုထောက်ခံပါတယ်။3ဆက်စပ်ပစ္စည်း (Long ကပါးစပ်, Brush, ဆော့ဖ Long က Tube), ပင်စည်ကို clean မှဖွနှင့်သင့်ကားထဲတွင်ရှိသမျှသောထောင့်ရှင်းလင်းပေးနိုင်သည်။ တိုင်းကားတစ်စီးတဦးတည်းရှိသင့်!
★အကြီးစားတာဝန် DESGIN: ကားတစ်စီးလေဟာနယ်စိတျထဲတှငျသငျနှငျ့အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်။ အဆိုပါလေဟာနယ်ကိုသုံးကိုင်ထားရန်လွယ်ကူခြင်း, စင်ကြယ်၏။ အဆိုပါအမှိုက်သေတ္တာကလေးစက္ကန့်တစ်ခလုတ်ကိုနှင့်အချည်းနှီးသောအထဲကများ၏တွန်းအားပေးမှုနှင့်အတူဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါထည့်သွင်း HEPA လေထု filter များရေချိုးနိုင်သောနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပါတယ်။
★သုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေ: 4.5M (16.4-FT) ပါဝါကြိုးမဆိုခက်-to-လက်လှမ်းမမီသောဧရိယာရှင်းလင်းဖို့ကူညီပေးသည်။ လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ: ရုံ on / off လှည့်။ ဒါဟာကားတစ်စီး၏ပေါ့ပါးသင့်ရဲ့စီးကရက်မှတစ်ဆင့် powered ဖြစ်ပါတယ်ကိုမဆို DC က 12-Volt စီးကရက်ပေါ့ပါးခြေစွပ် (ကားများနှင့်လှေ) သို့စီးကရက်ပေါ့ပါး plug ကိုထည့်ပါ။
★အရေးကြီးအသိပေးစာ: သင်မည်သည့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရှိပါကစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေ 15 မိနစ်အကြာတွင်အသီးအသီးအချိန်3မိနစ်တစ်ချိုးယူပါ, ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့တှနျ့ဆုတျပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး, ငါတို့သည်သင်တို့ 24 နာရီအတွင်းတစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုကိုငါပေးမည်။
ဖုန်မှုန့်ဝေးသည့် filter ကိုမှရတာဟာ Pro ကို-ဆိုင်ကလုန်းစနစ်။
အသံဗလံ၏ dual ထိန်းချုပ်မှု။
ကွဲပြားခြားနားသောသန့်ရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကွဲပြားခြားနားသောစင်ကြယ်သော tools များနှင့်အတူတပ်ဆင်။
သေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့စုတ်ယူခြင်းပါဝါပေမယ့် Shimono လေဟာနယ်သန့်စင်။
Shimono လေဟာနယ်သန့်စင်, အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ Pro ကိုဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း။
မဆို color ကိုသင်တို့အဘို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့က 24 နာရီအတွင်းသင့်ရဲ့အီးမေးလ်နှင့်ဖက်စ် reply ပါလိမ့်မယ်။
ဘက်ထရီ operated ကားဖုန်စုပ်စက်
မော်တော်ကား Vecuum Cleaner
မော်တော်ကားသည် Mini ကိုဖုန်စုပ်စက်
Rechargeable အိတ်ဆောင် Mini ကိုဖုန်စုပ်စက်
ကားသန့်ရှင်းရေး Tool ကိုများအတွက်ဖုန်စုပ်စက်